🥇 ▷ Dib-u-fiirinta Laptops-yada Ciyaaraha ee HP Pavilion (15-dk0052TX): Ma mudan tahay iibsan? ✅
Dib-u-fiirinta Laptops-yada Ciyaaraha ee HP Pavilion (15-dk0052TX): Ma mudan tahay iibsan?
HP Pavilion Gaming Laptop (15-dk0052TX) wuxuu la imaanayaa 9th Gen Intel Core i7-9750H, PCIe NVMe 512GB SSD oo leh 1TB 7200RPM HDD, 12GB RAM iyo Nvidia GTX 1660 Ti kaararka garaafyada leh 6GB VRAM
Liiska ugu horreeya ee magac-ku-yaal magacyada macaamiisha doonaya inay iibsadaan laptop laptop waa Dell Alienware, MSI iyo Asus. Noocyadan sumcaddu waxay si cad u qabteen shaqo weyn, laakiin taxanaha buuggaagta ‘HP Pavilion Gaming’ ee buugaagta wax lagu qoro lama aqbali karo.
Kumbuyuutarrada taxanaha ah ee HP Pavilion Gaming waxaa laga heli karaa inta u dhaxaysa Rs70,000 ilaa Rs 1,20000. Maanta waxaan soo bandhigi doonaa dib u eegis ku saabsan laptop Laptop-ka HP Pavilion Gaming Laptop (15-dk0052TX) oo lagu qiimeeyay Rs 1.19,990.
Waxyaabaha aan jecel nahay:
Paptoion Gaming taxanaha kombuyuutarrada ayaa umuuqda kuwo cajiib ah. Cabbirka-biraha-birta leh ayaa loo adeegsadaa rinjiyeynta madow ee midabka leh iyo mowduucyada guduudan ee astaanta u ah si ay u siiso muuqaalka kombiyuutarka ciyaarta ciyaarta. Nidaamyada rinjiga ee hufan ee dhiirigeliyay dayuuradaha dagaalka ayaa sidoo kale u muuqda kuwo aad u fiican.
Qaabka geeska laptop-ka ee adiga ku salaamaya markii daboolka la furo wuxuu dareemayaa naqshad baabuur isboorti oo loogu talagalay aerodynamics. Isku soo wada duuboo, walxaha naqshadda laptop laptop-ka Pavilion Gaming lama arki doono. Miisaan 2.28KG mana aha laptop fudud. Sidaa darteed, habka loo sameeyo iyo tayada maaddooyinka la isticmaalay dhib badan kaaama gelinayaan.
Keyboard-ka wuxuu kaloo raacaa luqadda naqshada ee lagu arko jirka laptop. Waxay leedahay qorshe rinji madow oo matte leh oo leh tufaaxyo buluug ah, oo marka ay gadaal u egtahay qurux badan. Waxaan jeclahay inay ka fiicantahay casaanka ay isticmaalaan noocyada kale ee badan. Xitaa afhayeenka baarlamaanka korka sare keyboard wuxuu leeyahay naqshad malab leh oo u eg mid ka fiican naqshadeynta vanilj ee lagu arko inta badan laptopka.
Laptop laptop ah, ayuu qofku helayaa 15.6 inji dherer buuxa HD ah oo leh guluus aan lagaranaynin. Laptopsyada aan dib u eegnay waxay lahaayeen 144Hz IPS LCD panel. Ciyaarista ciyaaraha ama daawashada filimaanta waa hawl xiiso iyo dheecaan leh.
Waxay la timid jiilka 4-aad ee Intel Core i7-9750H processor9, 512GB NVMe NVMe SSD oo ay weheliso 1TB 7200RPM HDD, 12GB RAM iyo Nvidia GTX 1660 Ti kaararka muuqaallada leh 6GB VRAM. Markaa kadib markii aan eegnay faahfaahinta haddii aan kahadalno waxqabadka kumbuyuutarrada loo yaqaan ‘HP Pavilion laptop’, waxaan u isticmaalnaa laptops dhamaan howlaha maalinlaha ah, tafatirka fiidiyowga iyo ciyaarta ciyaarta. Waxaan ku qanacsanahay waayo-aragnimada bilaa-nasiibka ah isla mar ahaantaana, dhibaatada kuleylka xitaa inta lagu jiro isticmaalka waqti dheer ma ahan walaac. In kasta oo dadku dareemi karaan kuleylka markay u isticmaalayaan ciyaaraha dheeraadka ah ama fadhiyada tafatirka fiidiyowga. Laptop-kan wuxuu soo bandhigayaa waxqabadka ugu fiican howlaha aan qabanno.
Ma dhihi doono gollaha hadalka ‘Bang & Olufsen’ waa kan ugu wanaagsan ee aan ku aragnay kumbuyuutar laptop, laakiin waayo-aragnimada guud ayaa wanaagsan. Hadal-hayuhu aad uma dhawaaqo, laakiin carqalad kuma noqon doonto aragtidaada aragtida.
Waxyaabaha aanan jeclayn
Inta badan baytariyada buugaagta lagu ciyaaro, wax soo saarku waa dhexdhexaad. Taxanaha HP Pavilion kama duwana. Celcelis ahaan, waxaan helnaa boos celis qiyaastii 4,5 saacadood.
HP Pavilion Gaming Laptop (15-dk0052TX) waa mashiin awood leh oo xamili kara hawl kasta oo aad tuurto. Qeybta batteriga ma laha tamar ku filan oo ay ku ordo marathon, waxaan dhihi karnaa way fiicantahay in la ordo 200 mitir.